Andavamamba : tovolahy vao erotrerony mandravarava mamaky trano
Tovolahy manodidina ny 20 taona, eo ireo mpamaky trano, ary manao asan-jiolahy eny Ambilanibe Andavamamba. Efa-dahy mpamaky trano no voasambotry ny polisy avy amin’ny Poste de police Ilanivato, ny alatsinainy, 7 mars 2016, tamin’ny 05 ora hariva, sy ny Talata 8 mars tamin’ny 9 ora maraina, teny Ambilanibe Andavamamba. Nisy vaky trano niseho teny an-toerana […]
Nanakorontana 8 marsa : dahalo roa maty voatifitry ny miaramila
Dahalo saika hanakorontana ny fety fankalazana ny Andron’ny vehivavy no lavon’ny miaramila nandritra ny fifandonana, ary dimy kosa lasa nandositra. Tao anatin’ny ny lanonana fankalazana ny 8 marsa tany amin’ny fokontany Soaserana Antevamena, kaominina Vatolahy, distrikan’i Miandrivazo, nisy andiana dahalo fito lahy nikasa hanakorontana sy nanao tifi-danitra tokony ho tamin’ny 10 ora antoandro tamin’io andro […]
Ampasika : nahazo poste de police vaovao ny mponina
Notokanana, omaly, ny poste de police vaovao eny Ampasika. Tonga teny an-toerana nitokana izany ny sekretera jeneralin’ny polisim-pirenena, izay solontenan’andriamatoa minisitry ny Filaminam-bahoaka sy ny tale jeneralin’ny polisim-pirenena ary ireo tale isan-tsokajiny eo anivon’ny polisim-pirenena, ny ben’ny Tanànan’i Bemasoandro Itaosy, ny lehiben’ny distrika ary ny solombavambahoaka eny Atsimondrano. Nisaotra izay rehetra malala-tanana ka nahavitana ilay […]
Minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka : «Ambany ny fari-pahaizan’ny paramédicaux avy amin’ny sekoly tsy miankina»
« Ambany ny lentan’ny fari-pahazain’ny mpampivelona sy ny infirmier mivoaka avy amin’ny sekoly tsy miankina eto amintsika », araka ny fanazavan’ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, Randriantsimaniry Damoela, omaly teny Ambohidahy. Nivoitra izany taorian’ny fifaninanana nandraisana infirmier sy mpampivelona nokarakarain’ny minisitera fa natokana ho an’ny ivotoeram-panofanana paramédicaux tsy miankina amin’ny fanjakana manerana ny Nosy. 32 ny isan’ny sekoly […]
Taom-baovao hoe ?
Par Taratra sur 11/03/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Taom-baovao malagasy omaly, araka ny fanisan’andro nataon’ny andaniny mankalaza izany. Tsy izy io fa ny volana jolay izao vao Taom-baovao malagasy, araka ny famaritan’ny ankilany azy. Mifanipaka ny hevitra eo amin’ny fanondroana ny daty fankalazana ny taom-baovao malagasy na samy Malagasy aza no mamaritra azy. Tsy mahagaga raha ampahan’olona no mamonjy ny fety aman-danonana karakaraina […]
Par Taratra sur 11/03/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Azo lazaina ho naratra mafy, satria vaky loha mihitsy ity lehilahy iray, voadona sy nofaohan’ny taxibe iray, teny amin’ny lalana digue, Ambodihady, omaly maraina ity. Voalaza fa saika hamono tena izy io, ary nitsoraka tamin’ireo fiara nandalo. Fiarakodia roa : 4X4 niromorimo mafy sy taxi-be 194, no efa nohitsiany saingy samy nahay niala azy ny […]
Complexe sportif de Mahajanga : tsy mbola misy mpitantana ny fotodrafitrasa
Par Taratra sur 10/03/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Hatreto, mbola mifamahofaho be ny mikasika ny fitantanana ny Complexe sportif de Mahajanga. Tsy fantatra mazava izay hahazo ny fitantanana. Mbola mitohy kosa ny asa fanamboarana ny fotodrafitrasa… Complexe sportif de Mahajanga. Kianja marolafy vao noforonina ary tafajoro amin’ny ampahany ao Mahajanga. Fotodrafitrasa tafiditra indrindra amin’ny tetikasan’ny filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery. Hatreto anefa, mbola misedra olana […]
Kitra ao Alaotra-Mangoro : ekipa 10 hiady ny lohany
Nisokatra, ny alahady 6 marsa teo, ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ligin’Alaotra-Mangoro, eo amin’ny taranja baolina kitra, sokajy D1. Ekipa folo hiady ny anaram-boninahitra, ho an’ity taom-pilalaovana 2016 ity. Mandroso sy miverina ary mifandimby mihaona avokoa ireo ekipa rehetra, amin’ity. Tsy Ambatondrazaka irery no mandray anjara amin’izany fa eo koa Amparafaravola sy Tanambe. Tsy manana […]
«Ligue des champions 2016» : tafita any amin’ny ampahefa-dalana ny Real
Ekipa voalohany, tafita amin’ny ampahefa-dalana, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa «Ligue des champions 2016», ny Real de Madrid. Mbola resiny tamin’ny isa 2 noho 0, nandritra ny lalao miverina, ny AS Roma. Fihaonana notontosaina tao amin’ny kianja Bernabeu, ny talata lasa teo. Tsy nisy fitaintainana fa toy ny nanaovan’ny Real de Madrid fanazarantena […]
Erick Manana sy Dama : « Ny fifamenoana no fototry ny fiarahana… »
Par Taratra sur 10/03/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Nanomboka tamin’ny fampisehoana iray nokarakarain’ny mi’Ritsoka Production, ny taona 2010 ilay fiarahana an-tsehatr’i Dama sy Erick manana. Enin-taona taty aoriana, hiverina indray ny seho. “Niainga teto, nentinay nitety tany ary haverina eto ihany….”, hoy i Dama. Ilay fampiarahan-talentany sy i Erick Manana no tiany hambara amin’io, izay nanaovan’izy ireo tatitra tamin’ny mpanao gazety, omaly. Fantatra […]
Tontolon’ny soratra sy fiarahamonina : « … Mila mitady ny very isika ankehitriny »
Faha-150 taona nahaterahan’ny « Teny soa hanalan’Andro ». Gazety voalohany voasoratra amin’ny teny malagasy. Tafiditra ao anatin’ny fanamarihana io vanim-potoana io ny nisian’ny velakevitra narahina adihevitra teny amin’ny lapan’ny Akademia malagasy Tsimbazaza, omaly. Fotoana nitondrana fanazavana fa efa nandalo ny vanim-potoan’ny mitady ny very ny tononkalo teto Madagasikara satria saika lasa nanenjika rima fotsiny. Nitranga tany amin’ny […]
Jobily volamena : 50 taona nitandremana ny pasitera Ramino Paul
Mankalaza ny faha-50 taona nitandremany ny pasitera Ramino Paul. Hanomboka amin’ny alahady izao ny fankalazana amin’ny alalan’ny fanompoam-pivavahana hatao etsy amin’ny FJKM Amparibe Famonjena. Hisy ny fampirantiana, fintina ny 50 taona niasan’ny mpitandrina sy fanolorana ny boky nosoratany. Hotanterahina ny asabotsy 18 jona ny ivon’ny fankalazana. Hisy ny fanompoam-pivavahana iarahana amin’ny synodam-paritanin’Antananarivo Andrefana (SPAA 10). […]
Fahadiovana sy fidiovana : firenena fahefatra ratsy indrindra i Madagasikara
Raha ny filaharana, firenena fahefatra ratsy indrindra amin’ny fahazoana rano fisotro madio sy fahadiovana ary fidiovana i Madagasikara. 34%-n’ny mponina ambanivohitra ihany no mahazo izany rano fisotro madio izany. Tsy tratra ny tanjon’ny taonarivo fahatelo teo amin’ity sehatra ity na teo aza ny ezaka nataon’ny minisitera. Antony mahatara an’i Madagasikara eo amin’ity sehatra ity ny […]
Lefakozatra : entanina handresy lahatra ny ray aman-dreny ny sekoly
Hanomboka ny 14 ka hatramin’ny 18 marsa izao indray ny hetsika afanaovam-baksiny hiadiana amin’ny aretina lefakozatra andiany faha-fito manerana ny Nosy. Nomena fanampim-pahalalana mikasika ny tokony tsy maintsy hanaovam-baksiny ny ankizy ireo talem-paritry ny fanabeazana avy amin’ny sekoly tsy miankina amin’ny fanjakana omaly tetsy Anosy. Nampahafantarina azy ireo ny tokony ho fandresen-dahatra hatao amin’ny ray […]
AUF : lasa hetsika nasionaly ny fifaninanana adihevitra
Notontosaina, omaly teny amin’ny biraon’ny Agence universitaire de la francophonie (AUF sampana ranomasimbe Indiana) eny Faravohitra, ny fampahafantarana ireo ekipa handray anjara amin’ny fifaninanana miady hevitra amin’ny teny frantsay, hatao ny 15 hatramin’ny 18 marsa eto Antananarivo. Raha tsiahivina, karakarain’ny AUF io fifaninanana io ary andiany faharoa no tanterahina amin’ity taona ity. Enti-manamarika ny Andro […]
Fivorian’ny Frankofonia : ho avy eto amintsika i Ban Ki-moon
Par Taratra sur 10/03/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Sambany eo amin’ny tantara. Ho avy hanatrika ny fihaonana an-tampon’ny Frankofonia (OIF) hatao eto amintsika, ny novambra izao, ny sekretera jeneralin’ny Firenena mikambana (ONU), Ban Ki-moon. « Anisan’ny ho avy eto koa ny mpanjaka maraokanina, ny praiminisitra kanadianina ary ireo filoham-panjakana mpikambana eo anivon’ny OIF », hoy ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Atallah Béatrice, omaly tetsy Anosy. Mialoha […]
Zaka tsara : tsy misy mpanohitra
Tsy misy mpanohitra, hono, ny fitondrana; ny marina, ny antokon’ny fitondrana, na ny eny anivon’ny Antenimiera roa tonta. Hery vaovao matanjaka izany? Manjaka tokana, fa tsy hoe toka-maso manjaka amin’ny tanin’ny jamba. Tsy jamba ny vahoaka, matoa tsy miteny, na hoe manaiky matoa tsy miteny. Ny mifanohitra amin’izany aza: tsy manaiky matoa tsy miteny, fa […]
Fanambaran’ny governemanta : « Efa tsy misy ahina ny fahasalaman’ny minisitra Mahafaly »
Vaovao mahafaly ! Namoaka fanambarana momba ny toe-pahasalaman’ny minisitry ny Atitany, Mahafaly Solonandrasana, ny eo anivon’ny filankevitry ny governemanta, natao teny Mahazoarivo. Nivoitra tamin’ny fanambarana, araka ny fampitam-baovaon’ny konsily jeneralin’i Madagasikara atsy La Réunion fa efa tsy misy ahina intsony ny toe-pahasalaman’ny minisitra, tsaboina any amin’ity Nosy ity amin’izao fotoana izao. « Manamafy izany ny fitiliana […]
Antenimiera roa tonta : mampidina an-dalambe ny tsy fisian’ny mpanohitra ara-dalàna
Adihevitra be ny amin’ny tsy fisian’ny mpanohitra eny anivon’ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona. Tsy mahay mifanaraka ny samy mpanohitra? Ny ao anatiny na ny ety ivelany… Na mbola kely hery ny mpanohitra, na tsy azo antoka. Misy milaza fa voatery ho ny Tim, Mapar, AMMM… ihany ve ny mpanohitra? Aiza ny sakana na avy amin’iza […]
Ralambomahay Toavina : “Be loatra ny mitabataba fa tsy sahy manohitra”
Aiza ho aiza ny toe-draharaham-pirenena? Na ny fanarenana ny fiainam-bahoaka… Maneho ny fijeriny ny mpandinika ara-politika, Ralambomahay Toavina: “Be loatra ny olom-pirenena milaza tsy faly amin’izao fiainana izao, nefa tsy sahy manohitra.” Dinidinika… Gazety Taratra (*): Ahoana ny resabe talohaloha teo ny amin’ny tokony hanovana na tsia ny governemanta? Ralambomahay Toavina (-): Raha io lalàmpanorenana […]
Ho fantatra ato anatin’ny iray volana ny tetikasa iarahantsika amin’ny orinasa Dangote eo amin’ny tontolon’ny angovo, araka ny fihaonana teo amin’ny filoha Rajaonarimampianina sy ny tale jeneralin’ity orinasa goavana ity, Serigne Aramine Mbacke teny Iavoloha, omaly. Tafiditra amin’ny fiaraha-miombona antoka eo amin’ny roa tonta izany. Misehatra eo amin’ny tontolon’ny simenitra, ny fambolena sy ny siramamy, […]
« Précédent 1 … 1 424 1 425 1 426 1 427 1 428 … 1 489 Suivant »